Ogaden News Agency (ONA) – Xulafada Maraykanka oo Bilaabay Ka Bixida Dalka Suuriya.
Xulafada Maraykanka oo Bilaabay Ka Bixida Dalka Suuriya.
Posted by Dayr	/ January 12, 2019
Isbaheysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, ayaa billaabay hanaan ay uga soo baxayaan dalka Suuriya, sida uu sheegay afhayeen u hadlay.
Xulufada Mareykanka ee Kurdish-ka waqooyiga Suuriya ayaa ka cabsi qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanka ay waddada u furi doonto weerar uu Turkiga muddo qorsheynayey inuu halkaas ku qaado. Turkiga ayaa kooxaha Kurdish-ka Suuriya u arka inay halis amni ku yihiin.
La-taliyaha amniga qaranka Mareykanka, John Bolton ayaa talaadadii sheegay in badbaadinta Kurdish-ka ay shuruud u tahay bixitaanka ciidamada Mareykanka, hadalkaas oo ka cadhaysiisay madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan, kaasi oo ku qeexay “qalad weyn.”